Xaaladda magaalada Kisumu - BBC Somali - Maqal iyo Muuqaal
Xaaladda magaalada Kisumu
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 27 Febraayo, 2013, 13:58 GMT 16:58 SGA
Shan sano ayaa ka soo wareegaty tan iyo markii dadka reer kenya ay ku dagaalameen doorashooyin natiijadeedii madaxweynanimo la isku khilaafay, waxaana rabshadahaas ku dhintay in ka badan 1,300 oo qof waxaana ku barakacay in ka badan shan boqol oo kun.
Kisumu waxa ay ka mid tahay magaalooyinka rabshaduhu ka dhaceen shan sano ka hor
Shan sano ayaa ka soo wareegaty tan iyo markii dadka reer kenya ay ku dagaalameen doorashooyin natiijadeedii madaxweynanimo la isku khilaafay, waxaana rabshadahaas ku dhintay in ka badan 1,300 oo qof waxaana ku barakacay in ka badan shan boqol oo kun oo kale.
Rabshadahaas oo isu badelay beelo iyo bulshooyin gacmaha isula tagay ayaa waxay ku qasbtay beesha caalamka in ay faragelin sameyso. Xoghayihii hore ee QM Kofi Anaan ayaa loo xil saaray dhaxdhaxaadinta dhinacyaddii is qabtay, waxaana lagu heshisiiyey in ay sameystaan dowlad wadaag ah.
Magaalada Kisumu ee gobolka Nyanza waxay ka mid ahayd meelihii rabshadaha ba'an ay ka dhaceen ka dib doorashooyinkii natiijadooda la isku khilaafay ee 2007-dii. Waa halka uu ka soo jeedo raisal wasaare Raila Odinga oo ahaa musharaxii sheegtay in looga shubtay doorashada markii lagu dhawaaqay in uu guulaystay madaxweyne Kibaki..
Rabshadihii halkan ka dhacay waxa ku dhintay in ka badan 60 qof oo intooda badan sida la sheegay ay boolisku toogteen . Shan sanno ka dib, magaaladu waa ay degantahay balse waxa muuqata in aanan weli laga soo kabsanin dhibaatooyinkii dhacay.
Grace Wamboi Odongo, waxay ka soo jeedaa beesha Kikuyo, waxayna u dhaxday oo ay ilmo u dhashay nin caan ah oo ka soo jeeda beesha Luo oo degaan ahaan ah beesha ugu badan gobolkan.
Muddo ka badan 30 sanno ayey ku nooleyd Kisumu Waxayna halkaasi ka smaeysay gannacsi heer sara ah oo isugu jiray huteelo, guryo la dego iyo gaanacsi kale.
Markii ay rabshaduhu bilawdeen, waxa dhulka lagu daray oo laboobay gannacsigeedii, sababtuna waxay ahayd in ay ka soo jeedo beesha kikuyu oo loo arkayey in ay taageereen guusha madaxweyne Kibaki.
Heshiis siyaasadeed oo ay qeyb libaaxle ka qaadatay beesha caalamka ayaa lagu soo afjaray dhiigii daadanayey, dowladda wadaag ah ayaana loo sameeyey dalka .
Balse shan sanno ka dib, Iyadoo haddaba la isu diyaarinayo doorashooyin kale, Grace waxay u muuqataa in weli aanay qalbigeedu ka bixin murugadii iyo dhibaataddii ay la kullantay. Waxay gannacsigeeda u soo wareejisay Nairobi oo aan kula kulmay.